Somali ku go'doonsan dagaallada Libya - BBC Somali
Somali ku go'doonsan dagaallada Libya
Image caption Qaxooti Soomaali ah
Iyadoo lagu kala cararayo dalka Libya oo ay ka socdaan dagaallo looga soo horjeedo dowaldda kornayl Qaddaafi, ayaa dowladaha waaweyni ay muwaadiniintoodii ka daadgureynayaan goobihii ay ku noolaayeen iyagoo looga soo gurmanayo dhinacyada cirka, dhulka iyo badda intaba. dadka ajnabiga ah ee baxaya qaarkood waxay tegayaan xuduudaha dalka Libya halkaas oo diyaar loogu yahay si dalalkooda loogu qaado. hase ahaatee waxaa jira dad badan oo u dhashay waddammo sabool ah oo dadkooda aan qaadan karin amaba kuwo aan dowlad lahayn sida Soomaalida oo kale.
Qaar ka mid ah Soomaalida ku go'doonsan dagaallada Libya oo BBC-da la soo xiriiray waxay sheegeen inay cabsi badan ku nool yihiin sababtoo ah waxaa jira warar sheegaya in dad madow ah oo calooshood u shaqaystayaal ah ay u dagaallamayaan sidii hoggaamiyaha Libya kornayl Mucammar Al Qaddaafi xukunka loogu sii hayn lahaa, sidaas darteed ay ka baqayaan in si aan kala sooc lahayn bartilmaameed looga dhigto dadka madow oo dhan. waxaa Soomaalida intaas u dheer iyagoo aan haysan wax ay quutaan oo markii horeba soo galooti ahaa.
Dadkaas qaarkood waxay u warrameen weriyaha BBC-da ee magaalada Rome, Aadan Sabriye, oo faahfaahin ay ka siiyeen xaaladda ay ku sugan yihiin.